Tohatra tohatra roa
Tohatra tohatra Mono Beam
Stainless vy lalamby
Glass Post Railing
Fiara fitaratra vita amin'ny alim-by
Fiarovana vy nentim-paharazana
Varavarankely sy varavarana mihidy vy
Windows Varavarankely vy sy varavarana
Varavarankely vy sy varavarana
Windows Window & Doors
Windows Windows raikitra
Varavarankely sy varavarana mihidy Aluminium Bi-Fold
Varavarankely sy varavarana mihodina Aluminium
Varavarankely sy varavarana mihidy aluminium
Varavarankely sy varavaram-baravarankely ACE misy ny varavarankely misy ny varavarankely, varavarankely mihantona, varavarankely mihidy, varavarankely mihidy, varavarankely mihidy, varavarana mihidy, varavarana misolampy, varavarana misosa ary rindrin'ny varavarankely sns.
Varavarana miharo volo zaridaina an-trano Villa
Ao amin'ny trano fonenana villa maro, ny vavahady vy vita amin'ny vy no haingon-tarehy faran'izay lamaody indrindra, miaraka amina fikitihana kanto. Nanao haingon-trano varavarana vy ho an'ny mpanjifa maro izahay. Matetika izy ireo dia manaingo ny zaridainany na hotely misy varavarana vy, izay hahatonga azy ireo ho matsiro kokoa.
Manome serivisy namboarina hampihatra ny takian'ny mpanjifa tsirairay, hiezaka ny tratry ny herinay izahay hahatratra 100% ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Vidiny sy varavarana mihidy voajanahary voajanahary vy voajanahary
Fa maninona no namboarina ny varavarankely sy varavarana vy?
Ny votoatin'ny karbaona ambany dia mahatonga ny vy voarindra ho iray maharitra ary afaka manampy lanja amin'ny tranonao. Ny varavarankely sy ny varavarana vy dia azo ampiasaina amin'ny varavarana fidirana ivelany ao an-trano, varavarana efitrano fandroana, villa na trano ara-barotra hafa.
Ny vy voadio dia mahatanty ny toetr'andro mafy nefa tsy simba ary manome fiarovana lehibe satria tsy afaka vaky.
Izy io koa dia afaka miondrika amin'ny endrika noho ny tonta sy ny triatra. Noho ny faharetany dia mahazaka fanoherana ny harafesina izy.
Ireo vavahady ireo dia tsy mitaky fikojakojana ary loko maharitra koa noho ny fitsaboana ny loko vita amin'ny vovoka.
Na dia lafo be aza ny vy voadio raha oharina amin'ny fitaovana hafa, saingy mbola manome tombony maro ihany koa izay mahatonga azy io ho safidy tsara ho anao.
Volavola tsotra vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy varavarankely
Avotsory amin'ny fahalalahana saika tsy voafetra ny hevitrao sy ny fahaizanao. Amin'ny famolavolana, ny vy dia manome ny sakany azo atao lehibe indrindra miaraka amin'ny sanda ara-tsaina mety.
Ny mombamomba ny vy somary manify miaraka amin'ny sakan'ny haavon'ny toerana ambany indrindra dia mamela ny mangarahara, mamorona toerana onenan'ny tondra-drano maivana ary manome mari-pana amin'ny efitrano ahazoana aina.
Ny fahaizan'ny vy tsy manam-petra dia midika fa azo ampiasaina amin'ny maritrano nentin-drazana sy ankehitriny - any ivelany na ao anaty trano.
Ny fisehoan'ny vy mahaliana amin'ny maha-fitaovana azy dia ahafahana mamorona elanelam-potoana manomboka amin'ny fomba kanto sy kilasika ka hatrany amin'ireo maoderina sy lamaody.
Fitsangatsanganana vy vita amin'ny nentim-paharazana ho an'ny lavarangana na tohatra
1. Miorina mafy, mateza, mifandray, voarindra.
2. Hatsaran-tarehy voajanahary, matevina, tsotra ary mazava.
3. Manana plastika tena tsara izy io, ary afaka mamorona vy sy fefy isan-karazany mifototra amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
4. Fametrahana mora, tsy ferana amin'ny fisintahan'ny tany, mety amin'ny fananganana faritra lehibe.
5. Ny vidiny dia mora vidy kokoa.
Aluminium Post Handrail Powder Coated Balustrade System
Mora apetraka, mora fikirakirana, ary maivana ny vokatra ny valihaza mitafo alimika alimo.
Ny alim-baravarankely vita amin'ny alimika aluminium dia manana tanjaka avo, manovaova matanjaka ary mahazaka fanoherana tsara.
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana nentim-paharazana hafa, ny alim-baravarankely vita amin'ny alimo alimo dia afaka manohitra ny fiatraikany sy ny fihenjanana bebe kokoa raha manana fahalalahana tsara kokoa.
Terrace Aluminium Frameless U Channel Base Glass Railing
Aluminium Base Shoe Glass Glass
6063-T5 Fitaovana aliminioma miaraka amin'ny fanoherana ny harafesiny tsara ho an'ny fampiasana anatiny sy ivelany. Vita toy ny loko anodized, loko manarona vovoka ary voan-kazo amin'ny endrika haingo maro.
Decking Steel Steel Stainless Steel
Miaraka amin'ny famolavolana maoderina sy ny vidiny ambany, ny lalamby vy no tena manolo ny lalamby amin'ny tohotra sy tohatra. Mampiasa vy vy ho toy ny akora hanamboarana singa mazava tsara isika, ka na ny hardware aza dia tsy mahazaka harafesina. Ny tariby maharitra dia vahaolana matanjaka izay afaka miaro soa aman-tsara ny tokotaninao sy ny tohatrao. Vidio, mahazoa quote na jereo ireo tetik'asa vita!
Rafitra fanamoriana vy vy vy ho an'ny lavarangana
ACE's Steel Steel Rod Railing dia mety tsara amin'ny trano rehetra miaraka amin'ny fomba maoderina.
Miaraka amin'i Rods, ny fametrahana dia tsy mora velively ary ny fitaovana misy azy dia vy tsy misy fangarony hanampiana ity rafitra ity haharitra mandritra ny androm-piainany.
Rod Railing dia tsara ihany koa amin'ny tontolo morontsiraka izaitsizy, fampiharana miolakolaka ary toy ny arofanina tohatra. Ny tehina tsorakazo nataonay dia nanao ny rafitra lalantsara marindrano ho tsara indrindra hatrizay.
Volon-jiro vy avo indrindra amin'ny toeran'ny Glass
Ny rafitra fitaratry ny vatan-kazo vita amin'ny vera dia vita amin'ny vy vy / vy ary sarimihetsika fitaratra. Ny clip tsirairay dia vita amin'ny vy vy 304/316/2205. Mihazona ny takelaka fitaratra avy amin'ny andaniny roa izy amin'ny alàlan'ny takelaka vita amin'ny fingotra eo anelanelan'ny takelaka vy.
Ampiasao ny clip miaraka amina vera mahazatra, na afatory amin'ny vera efa nolavahana tamin'ny bolt mba hahazoana tanjaka fanampiny.
Fandroana fitaratra filomanosana fitondra milomano fitaratra
Clamping Glass Railing dia rafitra iray izay ahazoana antoka ny takelaka fitaratra misy sarina fitaratra napetaka amin'ny paositra na indraindray ny arofanina na kiraro. Ity rafitra ity dia tena tsotra ary tsara ho an'ny dobo sy ny lavarangana.
Glass Spigot: kilasy Stainless vy Duplex 2205, kilasy 304/316 azo alaina ihany koa. Duplex 2205 miaraka amin'ny fahaiza-manao fanoherana avo lenta. Safidy ambonin'ny spigot vera: Mirror Poloney vita / Satin-Finished / Nickel Brushing. Tsy misy lavaka ilaina amin'ny takelaka fitaratra. Izy io dia manana endrika efajoro sy boribory.
Varavarana fitaratra: vera azo antoka mazava tsara 12mm (1/2) miaraka amin'ny fanamarinana AS / NZS 2208, CE ary SGCC. Ny hatevin'ny hafa koa tsy azo atao.
Napetaka: gorodona vita amin'ny gorodona, tendrontany ary fitrandrahana fototra
Mila mampiasa talenta roa farafaharatsiny ianao isaky ny takelaka fitaratra 4 '. Ny tsirairay dia milanja manodidina ny 2kgs ary mirefy 160-180mm hatramin'ny farany ka hatrany ambony.
Rindrina vy tsy mihetsika vita amin'ny rindrina vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Ny fantsom-baravarankely Standoff dia rafitra iray ahazoana antoka ny takelaka fitaratra miaraka amina fiorenanana (varingarina vy boribory / toradroa). Ny lavaka dia misy lavaka mialoha, ary atsofoka amin'ny toerany, ary ny fijanonana miaro ny tontonana mankany amin'ny endrik'ilay tohatra sy rihana. Ity dia mety ho rafitra lalamby tsy misy rafitra miaraka amina fitaovana kely hita maso kely. Fanamarihana: noho ny fomba fifamatorana, ny fanapaha-kevitra hampiasa ity rafitra ity dia mila atao amin'ny dingana famolavolana satria ilaina ny fametrahana fanohanana ampy hanohanana ny vera.
Rm208, Fl 2, # 5 Bldg, NO.1980 Valan-javaboary ara-tsiansa sy kolontsaina, vondrom-piarahamonina Fukang, distrikan'i Longhua, Shenzhen
© Zon'ny mpamorona - 2021: Voatahiry ny zonao rehetra.